China Okwu Mmalite na Nchọpụta nsogbu nke agụụ Supercharger ụlọ ọrụ na ndị na-eweta ngwaahịa | TieLiu
Ihe dị iche n’etiti nnukwu ihe na-ehichapụ agụụ na nke agụụ na-ehichapụ na agụụ na-adị n’agbata breeki breeki na breeki nna ya ukwu, nke ejiri mee ka onye ọkwọ ụgbọ na-arịgo onye isi ya; mgbe agụụ supercharger dị na pipeline n'etiti breeki nna ya na cylinder ohu, nke a na-eji mee ka nrụpụta mmanụ na-arụpụta nke nna ukwu ahụ na-abawanye na braking mmetụta.
Agụụ supercharger mejupụtara agụụ usoro na haịdrọlik usoro, nke bụ pressurization ngwaọrụ nke haịdrọlik braking usoro.
Agụụ supercharger na-akacha eji na ọkara na ìhè haịdrọlik breeki ugbo ala. Na ndabere nke okpukpu abụọ nke hydraulic braking system, nnukwu supercharger na usoro nke usoro mmụba agụụ nke mejupụtara valvụ elele agụụ, cylinder agụụ na pipeline na-agbakwunye dị ka isi iyi nke braking ike, iji bulie ikike ahụ braking arụmọrụ ma belata braking akara ike.Ọ bụghị naanị na-ebelata ihe ọkwọ ụgbọ ọrụ ike, kamakwa mma nchekwa.
Mgbe agụụ supercharger mebiri ma rụọ ọrụ nke ọma, ọ na - edugakarị ọdịda breeki, ọdịda breeki, breeki breeki na ihe ndị ọzọ.
A na-agbaji nnukwu ụgbọ mmiri na-ekpo ọkụ nke hydraulic, ihe kpatara ya bụ ndị a:
Ọ bụrụ na piston na mgbanaka akpụkpọ anụ nke cylinder inyeaka mebiri emebi ma ọ bụ na valvụ eleleghị nke ọma, mmiri breeki n'ime ụlọ nrụgide dị elu ga-alaghachi na ụlọ nsogbu nke obere nsogbu n'akụkụ ọnụ nke mkpuchi ahụ ma ọ bụ otu- ụzọ valvụ n'oge braking. N'oge a, kama ịmanye ike, pedal ahụ ga-agbagha n'ihi nlọghachi nke mmiri na-eme ka mmiri sie ike, nke na-eme ka ọdịda ahụ daa.
Mmeghe nke oghere agụụ na valvụ ikuku na valvụ na-achịkwa na-achịkwa kpakpando gas na-abanye n'ime ụlọ na-esote ya, ya bụ, mmeghe valvụ na valvụ ikuku na-emetụta mmetụta mgbe ọ gasịrị. Ọ bụrụ na agbanyeghị oche valvụ ahụ ike, oke ikuku na-abanye n'ime ụlọ booster ezughi oke, ebe a na-anọpụkwa ụlọ ikuku na ikuku ikuku anaghị anọpụ iche, na-ebute nsonaazụ azụ na-adịghị mma na braking na-adịghị arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na anya dị n’agbata agụụ agụụ na valvụ ikuku pere mpe pere mpe, oge mmeghe nke ikuku valvụ na-akwụsị n’azụ, ogo mmeghe na-ebelata, mmetụta nrụgide na-adị nwayọ ma na-akpata nsonaazụ ọkụ.
Ọ bụrụ na ebe dị anya buru oke ibu, mmeghe nke oghere agụụ adịghị ezu mgbe a tọhapụrụ breeki ahụ, nke ga-eme ka breeki dọrọ.
Breeki Servo, Booster Assy Brake, Nchekwa onwe, Agụụ breeki Booster, Aftermarket breeki Booster, Ike breeki Booster,